KASHIFAAD: Maxaa keena is-qab Qabsiga siyaasadeed ee Puntland ? - Caasimada Online
Home Warar KASHIFAAD: Maxaa keena is-qab Qabsiga siyaasadeed ee Puntland ?
KASHIFAAD: Maxaa keena is-qab Qabsiga siyaasadeed ee Puntland ?
Is qab qabsiga Puntland waa mid waqti ku astaysan iyadoo mudadii Puntland ay jirtay is qabsigu uu ahaa xiliga doorashada sida uu ka markhaati kacayo Madexweyne ku xigeen kii horey ee Puntland Mr gaagaab: (waxaa la joogaa xiligii wareerka marka ninkasta gurigiisa haku wareero) wuxuuna ula jeeday “xiliga doorashada la isma fahmo cid walbaana iyadaa isla quman marka hala kala nasto”.
W/ Qoray Axmed Cabdi Gaare.